Maitiro ekudzora kuzvidya mwoyo zvakasununguka ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Nzira yekudzora kuzvidya mwoyo zvakasununguka. La kuzvidya mwoyo Chimiro chemusikirwo chekutya kuti isu tose takatambura pane imwe nguva. Zvisinei, zvichienderana nebasa rarinoita muupenyu hwedu, rinogona kuva manzwiro akafanana, chirwere, kana kusagadzikana kwepfungwa.
Nemamwe mashoko, nguva nenguva tose tinonzwa tichinetseka, pamwe nekuti tichaita chimwe chinhu chatisina kumbobvira taita, kupa basa, musangano unokosha, nezvimwe. Zvisinei, kana kufunganya kuchikuvadza upenyu hwomunhu hwezuva nezuva, kuchiita kuti asaita zvinhu zvezuva nezuva uye kuchiunza kutambura mupfungwa, tinogona kutaura kuti kunova chimwe chinhu chakakomba chaizvoizvo.
Saka kuti kuzvidya mwoyo hakushanduke kuva chirwere chepfungwa, ndizvo Zvakakosha kuziva zviratidzo zvako uye kuchinja nzira yaunozvibata nayo. Chaizvoizvo nokuda kwechikonzero ichi, kubva Ziva.online, tagadzirira zvimwe mazano ekukubatsira kugadzirisa kusagadzikana , zvichiita kuti uve nemwero zuva nezuva uye kunyange kukubatsira kudzivisa mamwe matambudziko akakomba mune ramangwana.
1 Maitiro ekugadzirisa kushushikana nemasikirwo: mazano anobatsira
1.1 1. Ronga maitiro ako ezuva nezuva
1.2 2. Ziva iwe pachako
1.3 3. Edza kunzwisisa pfungwa dzako nemanzwiro ako
1.4 4. Dzora kufema kwako
1.5 5. Iva nemafungiro asina kunaka
1.6 6. Iva nechinwiwa chinozorodza uye chenjerera kune zvinokurudzira
1.7 7. Nyatsoteerera kudya
1.8 8. Ita zvimwe zvekurovedza muviri
1.9 9. Wana basa rokuzvivaraidza naro kana basa rinonakidza.
1.10 10. Ramba kure neanxiogenic zviitiko
1.11 11. Usafunga nezveramangwana uchinyanyisa
1.12 12. Koshesa rudo uye gara kure nevaya vanokuvadza
1.13 13. Chenjerai doro, fodya nembanje
1.14 14. Fungisisa
1.15 15. Usambofa wakaregeredza chiroto chako
1.16 16. Ona chiremba wepfungwa kana chiremba wepfungwa
2 Nzira yekudzora kuzvidya mwoyo zvakasununguka
Maitiro ekugadzirisa kushushikana nemasikirwo: mazano anobatsira
La kuzvidya mwoyochero bedzi isati yava nyonganyonga, inogona kuva kudzora kana tikabatanidza miitiro mumuitiro wedu. Nokuda kweizvi tinofanira kuziva chikonzero chii zvinokuchidzira. Nechikonzero ichi, isu tinokurudzira kuti uverenge zano redu zvakanyatsonaka uye edza kuvayedza mumwe nemumwe kusvika wawana chikonzero chinoburitsa kunetseka uku.
1. Ronga maitiro ako ezuva nezuva
Ronga maitiro ako ezuva nezuva
La sangano muvengi wekuzvidya mwoyo. Kana tikachengeta zvese zvakarongeka, tichiziva chaizvo zvekuita uye kwekutarisa, zvese zvinoenda zvirinani. Zvikasadaro, unozozviwana uri pakati pezvinhu zvakawanda zvekuita izvo zvinogona kutora zviyero zvinotyisa, zvakakura kupfuura zvazviri chaizvo. Naizvozvo, edza kuronga mabasa ako muchirongwa kuve nekutonga kwakazara pamusoro pezuva rako nezuva.
Zvakakoshawo kuziva izvozvo Kurongeka hakubvi pakuda kuti nyika yako yese ikwane muhurongwa hwako. Dzimwe nguva zviitiko zvisingafanoonekwi zvinoitika uye iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuita nazvo. Kurongeka hakusi kutonga, tsvaga ruzivo kuti ukunde zvipingamupinyi zvausingagoni kudzora.
2. Ziva iwe pachako
Isu takafanana munzira dzakawanda, asi mumwe nemumwe ane nzira yake yekufunga nekuita. Naizvozvo, kuzviziva iwe pachako kunokosha. Usatarise vamwe kuti uzive zvekuita. Zvitarise iwe pachako uye dzidza nzira yako pachako yekuita uye kubata zvinhu.
Saka, zvakare inzira yakanaka yekuita ziva izvo zvinokonzeresa kushushikana kwako , kureva kuti, mamiriro ezvinhu anogona kuratidza mamiriro ekuzvidya mwoyo. Nenzira iyo, unogona kugadzirisa aya mamiriro neruzivo rwakawanda uye shandura mamwe maitiro ekuvandudza hupenyu hwako.
3. Edza kunzwisisa pfungwa dzako nemanzwiro ako
Kutaura wega ibasa rakanaka . Pese paunosangana nemanzwiro, edza kunzwisisa kuti chii chakaita kuti ione kuti ndezvipi zvinhu zvine chekuita nemamiriro emanzwiro iwayo.
Zvisinei, usava nehanya kana kushamisika nguva dzose pamusoro pezvauri kunzwa. Panofanira kuva nekuenzana pakati pekuda kunzwisisa uye kuzvibvunza iwe pachako.
4. Dzora kufema kwako
Dzora kufema kwako
La kufema ndechimwe chezvinonyanya kukosha kana zvasvika pakufunganya . Kudzora kufema kune kugona kukurudzira kana kugumisa kurwisa kwekushushikana, ine simba guru. Naizvozvo, kana ukanzwa kuti uri kufema nokukurumidza zvikuru, edza kuderedza kusimba kwekufema kwako. Inhale uye wofemera zvakadzika kuti ubatane newe uye usatakurwe nemamiriro ekufunganya.
5. Iva nemafungiro asina kunaka
Kazhinji, iyo kufunganya kunounza nhevedzano yemirangariro yakaipa, kuti zvinhu zvichakanganisika uye kuti zvakaipisisa zvichaitika, asi kazhinji, zvinongori fungidziro dzakawandisa dzekutya pachayo.
Kana pfungwa dzisina kunaka dzikapinda mumusoro mako, usavimbe nadzo uye udziise mune inogoneka chaiyo, usinganetseki kuti chii chingave kana chingave chiri.
6. Iva nechinwiwa chinozorodza uye chenjerera kune zvinokurudzira
Kofi yakanakira kukupa simba uye kuwedzera kwekuwedzera mangwanani, ichiwedzera kufunga. Asi kunwa kofi yakawandisa kunokuvadza, sezvo chiri chinwiwa chinokuchidzira funganyo zvakananga. Mushure meimwe awa , edza kutsiva kofi nelemongrass kana chamomile tii. Itsika yakanaka kwazvo kune hutano hwepfungwa dzako.
7. Nyatsoteerera kudya
Kune vanhu vanozvidya mwoyo, kuwana utiziro mune zvekudya kuti ubvise kushushikana kwakajairika. Zvokudya zvinotapira uye zvine mafuta akawanda kusunungura tryptophan, inokosha yebasa re serotonin (kugutsikana hormone).
Zvisinei, kune zvakawanda zvekudya zvine hutano zvine madosi akakwira etryptophan, zvakadai sehove dzakapfuma mu omega-3s, mbeu dzemafuta, mazai uye kunyange chokoreti yakasviba.
8. Ita zvimwe zvekurovedza muviri
Tsvaga chiitiko chako chaunofarira chemuviri uye chidzidzise kuti uwedzere hutano uye kugara zvakanaka kwemuviri wako. Chiitwa inobatsira kudzora kufunganya, kusunungura kushushikana, kupa kuzorora kwakanyanya uye kunatsiridza kurova kwemoyo.
Iwe unogona kufamba, jog, kushambira, kuita gymnastics, kumba kana kunze: chinhu chinokosha ndechokusarudza basa raunogona kuita katatu pavhiki. Mabhenefiti akakura!
9. Wana basa rokuzvivaraidza naro kana basa rinonakidza.
Tinofanira kuva nazvo mabasa anotizorodza Uye chimwe chezviitwa izvi chinogona kuuya kuburikidza nekuzvivaraidza. Nhasi, kune nzira dzisingaperi dzekuwana uye kudzamisa chero chinhu chinonakidza kuburikidza neYouTube mavhidhiyo kana facebook mapoka pakati pevamwe. Tsvaga yako yaunofarira chiitiko uye uite munguva yako yakasununguka!
Kana usati wawana yako, sarudza nguva yezuva kana yevhiki kuti uite chimwe chinhu chaunofarira chaizvo. Iyi nguva yekutiza yakakosha zvakanyanya.
10. Ramba kure neanxiogenic zviitiko
Pane zvimwe zvinhu zvinoita kuti tizvidye mwoyo zvakanyanya. Tinofanira kudzidzivisa kana kutsvaka nzira itsva dzokuzviita, tichideredza kukuvadzwa kuutano hwedu hwendangariro. Naizvozvo, edza kutarisisa kune zviitiko zvinokonzeresa izvi uye dzivirira kana kuzvishandura.
11. Usafunga nezveramangwana uchinyanyisa
Chimwe chinhu chikuru chefunganyo kufunga zvakanyanya nezveramangwana, kuita mabasa ese emazuva ano kufunga nezveramangwana. Kuti udzore izvi, the kuisa pfungwa pane zvazvino kunogona kukubatsira.
Kudzidzira, zvakakwana kuita zvimwe zviitiko kunzwa muviri wako, kufema uye manzwiro mamiriro, kunyatsoteerera ikozvino. Nguva dzose pfungwa dzako dzinoedza kufamba mune ramangwana, zvidzore kuburikidza nemanzwiro emazuva ano. Kunosunungura!
12. Koshesa rudo uye gara kure nevaya vanokuvadza
Yedu support mambure Zvakakosha kudzora kufunganya uye zvakare kurapa chero kusagadzikana kwepfungwa. Kuva nemumwe munhu wekuvimba naye, angave shamwari kana mhuri, kubatana uye kukoshesa avo vari pedyo newe kwakakosha.
Kukosha zvakaenzana kugara kure nevanhu vanonyanya kuzvidya mwoyo kana vasina kunaka izvo zvinogona kupesvedzera zvakananga chimiro chako chendangariro. Zvinogona kuita sezvine hutsinye pakutanga, asi kubvisa uku kuchakuitira zvakanaka mukutsvaga kwako kudzora kusagadzikana.
13. Chenjerai doro, fodya nembanje
Zvinhu zvose izvi ndizvo zvinokuvadza kana zvikadyiwa zvakawandisa. Kunyange zvazvo zvose zvichiita sokuti zvinokwezvera munhu kuti ambozorora, zvinopesana zvacho hazvitore nguva kuti zvioneke.
El doro Inogona kukusiya uchifara uye wobva wazorora, asi kunzwa ikoko kunoputika uye zuva rinotevera, kunetseka kunogona kuve kwakanyanya. Ndizvo zvinoenda kune mbanje, kuti, kunyangwe nekukurudzira kuzorora, Inogona kutoita kuti munhu azvidye mwoyo uye avhunduke, zvichiwedzera kuzvidya mwoyo nekufamba kwenguva.
La kufungisisa kunobatsira zvikuru kudzora kufunganya . Usati wafunga kuti hazvigoneke kwauri, edza sezvo vanhu vazhinji vaine pfungwa isiriyo yekuti kufungisisa chii.
Kusiyana nezvinofungwa nevanhu vazhinji, kufungisisa hakusi kwekubvisa musoro wako , asi kuti ufunge nezvezvino uye iwe pachako, munguva yako pachako, yekuzorora nekudzora kufema.
Mazuva ano, zvinokwanisika kuona mavhidhiyo kuti akubatsire mukufungisisa, pamwe nekuva nemaapplication uye mapodcasts ekuita inotungamirwa kufungisisa. Migumisiro yacho inoshamisa!
15. Usambofa wakaregeredza chiroto chako
Kune vanhu vazhinji vanosiya kurota kwavo kumashure, sechinhu chisina kukosha. Mhedzisiro inowedzera kuneta uye kushushikana mazuva, mukutenderera kunodzokorora kazhinji.
Kuti udzoke kurara, edza batanidza tsika yehutsanana hwekurara, izvo zvinogona kufananidzwa nekukwesha mazino ako. Unozviita nekuti zvakafanira, kuve nekufema kwakanaka uye kusave nemaburi. Nehope zvakangofanana.
Ronga nguva yako yekurara, ita kuti imba yako yekurara igadzikane, zvichida rima uye runyararo kurara, kudzivisa kudya zvakawandisa kana kuita mabasa emuviri nguva pfupi usati warara. Chii chimwe, usatarise terevhizheni uye usatore foni yako kunorara itsika yakanaka kwazvo.
Nekuita izvi, nekufamba kwenguva, husiku hwako hwekurara huchawedzera kubereka uye iwe uchanzwa wakagadzirira uye wakagadzirira zuva rinotevera, uchidzivirira iyo manzwiro ekugara akaneta.
16. Ona chiremba wepfungwa kana chiremba wepfungwa
chiremba wepfungwa kana chiremba wepfungwa
Kuisa mari muhutano hwako hwepfungwa ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekuita kuzvitarisira. Avo vanotsvaga nyanzvi idzi vanoita izvi nechinangwa chekusimudzira hupenyu hwavo nerusarura panyaya iyi ngachirambe chiripo. Mushure mezvose, vanogona kubatsira chero munhu kugadzirisa mamwe maitiro anogona kuwedzera hupenyu hwavo uye kugadzirisa hukama hwavo pakati pevanhu nenzira yakanaka.
Kana urikunyanya kuzvidya mwoyo uye usina chokwadi chekuita kuti adzikame, chiremba wepfungwa kana wepfungwa ichava shamwari yako yepamoyo mukati nguva ino.
Usaora mwoyo. The kudzora kufunganya Zvinogoneka kushandura tutsika tudiki tunobuda pamwe chete nekubatsirwa kukuru. Zvisinei, pane zviitiko umo chiremba wepfungwa anodiwa kuti aite kuti aderedze zviratidzo zvekutanga zvekuremara zvekushushikana uye kugadzirisa mamwe matambudziko nemurwere nekufamba kwenguva.
Saka kana iwe uchinzwa uchinetseka zvakanyanya, inzwa wakasununguka kutanga kuzviona uye kuchinja maitiro ako. Shanduko yekutanga inogona kunge iri yekungokumbira rubatsiro.
Tinovimba chinyorwa ichi pamusoro nzira yokudzora kuzvidya mwoyo nenzira yomuzvarirwo zvave zvinobatsira kwauri. Kana iwe uchida kuenderera mberi nekudzidza matipi ekuvandudza mamwe maficha ehupenyu hwako hwezuva nezuva, isu tinokurudzira kuti urambe uchitsvaga Ziva.online.